देउवा सरकारले अति गोप्य रुपमा गरेका २५० बढी निर्णय के थिए ? किन राखियो गुपचुप ? - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
काठमाडौं, ८ फागुन । अघिल्लो सरकारले साढे दुई महिनायता गरेका २५० भन्दा बढी निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गुपचुप राखेको छ। कर्मचारीकै आडमा ती निर्णय लुकाइएको हो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यस अवधिमा १५ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर गरेका निर्णय अहिलेसम्म कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छैन। तीमध्ये १०-१५ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका बैठक र सूचना शाखाका अधिकारीको गैरजिम्मेवारी र बेवास्ताका कारण राज्यका निर्णय जनताको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको हो।
बैठक शाखाका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले भने सरकारका विभिन्न निर्णय एकीकृत गर्ने काम भइरहेको र अब दुुई-तीन दिनभित्रै सबै निर्णय वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिएको दाबी गरे। बैठक र सूचना शाखाका अन्य निजामती कर्मचारीलाई यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा माथिबाट नबोल्ने आदेश छ भन्दै तर्कने गरेका छन्। जबकि यसअघि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय दुई-तीनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक भइसक्थ्यो।
सामान्यतय सरकारले गरेका निर्णय एक-दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयले वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु ओपीएमसी डट जीओभी डट एनपीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयले साढे दुई महिनादेखिका मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय वेबसाइटमा नराखेको हो।